Misy Krita 2.6 | Avy amin'ny Linux
Misy Krita 2.6
Ny ekipan'i tsaoka miaraka amin'ny ekipan'i Calligra efa nanambara ny Famotsorana an'i Krita 2.6, izay mampiditra ny fanohanana ankehitriny OpenColorIO Color Manager na Manager ampiasaina amin'ny sarimihetsika toy ny Spiderman 2, Surfers, Cloudy with a Chance of Meatballs, Alice in Wonderland, ary maro hafa. .
Mahatonga izany tsaoka safidy voajanahary ho an'ny asa loko 2D ary fifaninanana henjana ho an'ny GIMP. Na andro vitsivitsy lasa izay @malcer_x izay fantatra fa namorona (ankoatry ny zavatra hafa) ny lohahevitra ho an'ny KDE: Caledonia, nanome toky tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter azy fa tsaoka nihoatra GIMP amin'ny fizahana sary, na dia hitako aza, fa samy manana ny tanjony ireo programa roa ireo ..
Ho an'ireo izay tsy mahalala hoe inona izany tsaoka, Mitanisa avy ao amin'ny Wikipedia aho:
Krita (izay ny dikany dia crayon en Anarana) no rindrambaiko sary hosodoko nomerika e fanoharana miankina amin'ny fivarotam-boky avy amin'ny lampihazo KDE ary tafiditra ao Calligra Suite (fantatra amin'ny anarana hoe KOffice). Natao ho toy ny sary hosodoko fanaovana sary sy fanaovana sary nomerika, Krita dia free software nozaraina tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU GPL. Navoaka voalohany ho ampahany amin'ny KOffice kinova 1.4.0 tamin'ny 21 Jona 2005.
Raha ny marina, raha manontany ahy ianao dia azoko lazaina fa mitovy be izany Photoshop, mahita ny pikantsary manomboka an'ity lahatsoratra ity mazava ho azy .. 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Misy Krita 2.6
Tena tsara fa hizaha toetra azy tamin'ny herinandro lasa teo aho nametraka Calligra tamin'ny fitsapana an'i Debian niaraka tamin'ny KDE ary mahafinaritra izany.
Ary raha tena mitovy amin'ny photoshop ity lehibe ity.
Mahaliana, mila manandrana aho.
KDE sy QT mampiseho ny endrik'izy ireo amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, tsy haiko ny antony tsy miloka amin'ilay soavaly mandresy ¬¬
Marina izany fa mavesatra be ny KDE ho antsika izay manana solosaina taloha.
Misy mahalala hoe manao ahoana i Krita ao amin'ny Razor-Qt? Te hanandrana an'ity tontolon'ny birao ity amin'ny solosaiko taloha aho.
Tsy fantatro izany, andramako amin'ny Arch, misaotra
Izy io dia programa tsara fa ny olona manizingizina ny mampitaha azy amin'ny Gimp na PhotoShop raha ny tena izy dia programa hafa izy ireo.
Azonao atao ny milaza fa i Krita dia programa ho an'ny "Drafitra kanto" amin'ny alàlan'ny solosaina, tsy programa famerenana sary izy io, na dia manana toetra mahazatra an'ireo programa ireo aza izy. Mety ho lojika kokoa ny mampitaha azy amin'ny Corel Painter.
Ny mampalahelo an'ity karazana rindrambaiko ity dia raha tsy hainao ny manoritra azy dia tsy dia ilaina loatra.
Potenteee dia tsy maintsy lazaina App ho eo an-tampon'ny sarimihetsika lehibe ..
Tsy nifanaraka tamin'i Gimp mihitsy aho, fa miaraka amin'i Krita dia faly aho xD, raha ny hevitro, raha tsy ny fifaninananan'i Gimp… dia ny mpandimby azy
Tsy misy ifandraisany i Krita sy i Gimp. Gimp dia ho an'ny fanodikodinana sary sy famerenana indray. Krita dia famoronana zavakanto. Ny antsoin'ny maro hoe Krita dia nahavita nihoatra ny Gimp dia amin'ny fanodikodinana malaza sy ny fanodikodinan-doko satria i Kriita dia manohana ny CMYK (amin'ny resaka fanontana sy izay rehetra misy) ary ny Gimp kosa tsy.
Hametraka azy aho, izaho dia mpilalao sarimihetsika ary mpanao drafitra nandritra ny an'arivony taona maro, ka ho hitantsika izay mitranga ...
Tsara…. Tsara noho Gimp? hikorontana ianao ...
Ny zavatra hitako sy tiako dia ny fanohanana CMYK sy ny fahaizana miasa amin'ny 16 bit. Ny ambiny raha resaka borosy sy ny hafa ... toa kely ihany ny zavatra hitako. Mazava ho azy fa mifantoka amin'ny sary fa tsy dia be loatra.
Na eo aza izany, mbola aloha loatra ny hitsara.
Marina ny anao, haingana loatra ianao no nitsara azy. Krita dia fitaovana iray tsy dia misy dikany loatra any Espana, fa ny iray amin'ireo forum miteny anglisy dia misy fisintomana bebe kokoa, ary amin'ny lafiny maro dia ambony noho ny GIMP raha ny amin'ny fanaovana sary / famoronana. Fampiasana sasany:
- Torolàlana ho an'ny fomba fijery, mamela anao hiteraka takelaka hahomby ny fomba fijerin'ny sary. Mahasoa tsy mampino
- Mpijery samy hafa amin'ny sary mitovy.
- symmetrika X / Y, na sary hoso-doko symmetrika.
- Mahagaga ny habetsaky ny borosy sy ny masontsivana ananany.
- bokotra ankavanana mampiseho mpamaky loko radial, tantaran'ny loko ary pineceles tianao indrindra.
- Fanapahana moramora mora amin'ny 'shift' + totozy ankavia / havanana hampitomboana / hampihenana ny haben'ny borosy.
- Mifantina loko izay azo ampifandraisina amin'ny lakile rehetra.
Manoro hevitra anao aho hamaky ity bilaogy ity, avy amin'ny artista iray izay mampiasa Krita amin'ny ankapobeny (ary koa gimp, mypaint, sns ..). Ankoatry ny fanaovana sary an-tsaina hoe ho faty ianao dia manana torohevitra vitsivitsy momba ny fananganana an'i Krita izy.
Ry mpiara-miasa Linux, misy aminareo mahalala ve raha azo atao ny mahazo an'i Krita ho fonosana misaraka amin'ny Calligra Suite?
Mila manandrana an'i Krita aho satria Gimp sy Inkscape no nampiasako ary tena alaim-panahy aho hanandrana :)
Gazety TuxInfo # 55 misy